Isikhokelo seProfayile se-LinkedIn: Isikhokelo sokuBonwa esiPhezulu sokuGcina i-LinkedIn
Isikhokelo sokuGqibela sokwakha iProfayili eQhagamshelwe ngokugqibeleleyo
NgoLwesibini, Februwari 9, 2021 NgoLwesibini, Januwari 11, 2022 Douglas Karr
Kukho itoni yesiphithiphithi ngoku kwicandelo loshishino. Ndizibonile ngokwam uninzi lwamashishini amancinci achitha izixhobo zokuthengisa kulo lonke ubhubhane kunye nokutshixwa okunxulumene noko. Kwangelo xesha linye, nangona kunjalo, bendikhe ndabona ukuba amashishini ayasokola ukufumana italente kunye namava.
Bendisoloko ndicebisa abantu abaninzi kumzi mveliso wam ukuba batshintshe ukugxila kweeprofayili zabo ze-LinkedIn kunye namava kwiinkampani ezinkulu. Kuzo naziphi na izidubedube zoqoqosho, iinkampani ezineepokotho ezinzulu zibona amathuba okutyala, ukuqesha, kunye nokulungiselela isigaba sokukhula esilandelayo. Amashishini amancinci awanazo izixhobo zokwenza oku.
Sele sipapashe izikhokelo ezimbalwa ze-infographic Iiprofayili eziDibeneyo, kubandakanya Iingcebiso zeProfayile ye-Linkedin Ukulungiselela a Iprofayili ye-LinkedIn yokuThengisa uLuntu, kodwa le Iphepha lokugqibela lokukopela kwimisebenzi yolonwabo sisixhobo esicocekileyo nesimnandi sokuqinisekisa ukuba uyayandisa ngokupheleleyo i-LinkedIn yothungelwano kunye nokukhangelwa kwemisebenzi.
Ngaba uyazi ukuba iprofayile ye-Linkedin elungiselelwe ngokupheleleyo ngamaxesha angama-40 ngaphezulu okufumana amathuba emisebenzi?
Isikhokelo sokuGqibela kwiiProfayili eziDityanisiweyo siquka amanyathelo ama-7
IProfayili egqibeleleyo yeProfayili -Zifumanele umfoti wobuchwephesha ukuze ubambe obunye ubuntu kuloo foto, kwaye ugcwalise onke amasimi axhumene nawe kwi-LinkedIn! Iifoto ze-LinkedIn zibeka umbono obalulekileyo wokuqala.
Ubungakanani bomfanekiso -Umfanekiso wobungakanani obufanelekileyo ubukeka buhle nakwesiphi na isixhobo, qiniseka ukuba ulandela iinkcukacha ezibonelelwa yi-LinkedIn kwaye zidweliswe apha ngezantsi kwi-infographic.
Ukufikelela kwiiNgcebiso -Ukuba umntu othile ukuxelela indlela omnandi ngayo, buza ingcebiso nge-LinkedIn! Ziya kudityaniswa nomsebenzi ngamnye owuzalisileyo.
Iimpawu eziDibeneyo ze-LinkedIn -Joyina amaqela, Thatha amanqaku kwi-LinkedIn kwaye uqiniseke ukuba ubonakalisa iiNtetho zakho zeSlideshare apho!
Fumaneka kwi-LinkedIn Yenza i-URL yakho ngokwezifiso, sebenzisa izihloko ezenzelwe izihloko zomsebenzi, kwaye uqhagamshele kwiwebhu nakwiipropathi zentlalo.
I-LinkedIn Iingcebiso Zemihla ngemihla -Ukubonelela ngexabiso, ngokwabelana ngeengcebiso, ngokudibanisa inethiwekhi yakho nezikhokelo, kwaye ukuba ligosa elifanelekileyo kwinethiwekhi yakho kuya kukunceda ube yinkosi ye-LinkedIn.
Khusela iProfayili yakho -Abaninzi abantu baya bejolisa kwizikimu zobuqhetseba kwaye bajolise ekuhlaseleni ngenkani. Yenza uqinisekiso lwezinto ezi-2 ukuze abantu bangabinakho ukutsiba iakhawunti yakho.
Ukuba ufuna ngokungxamisekileyo isikhundla esitsha kwaye ufuna ukwandisa amathuba akho, unokufuna ukutyala imali kuwo LinkedIn Premium. Inika ukubonakala okungaphezulu kuphando lwangaphakathi kwaye ikwenza ukuba wenze ukufikelela ngakumbi ngezi zinto zilandelayo:
Imiyalezo ye-imeyile -Nxibelelana ngokulula nabaphathi bokuqesha.
Ngubani oJonge iProfayile yakho -Bone ukuba ngubani okhe wajonga iprofayile yakho kwiintsuku ezingama-90 ezidlulileyo.
Iikhonkco zokuFunda eziDibeneyo -Ukufikelela ngaphezulu kwe-15,000 ekhokelwa ziikhosi ze-LinkedIn zokufunda ukuze uzilole izakhono zakho okanye ufunde into entsha.
Ukulungiselela udliwanondlebe Yakha ukuzithemba kwakho kwaye ume ngaphandle ekuqesheni abaphathi ngemibuzo yodliwanondlebe ephezulu, iimpendulo zodliwanondlebe ezivunyiweyo, kunye nokunye.
I-infographic yi-Leisure Jobs, ikhaya lokubuka iindwendwe, ezemidlalo kunye nemisebenzi yokuthengisa e-UK.
tags: imisebenzi yolonwaboLinkedInUmxholo odibeneyoiprofayili edibeneyoIsikhokelo sephrofayiliUkulungiswa kweprofayili edibeneyoIingcebiso zeprofayili ye-linkinLungiselela ikhonkco
Ukujonga ngokulula, ukubeka iliso, kunye nokulungisa amakhonkco aphukileyo kwiWordPress
Mar 23, 2016 ngo-1: 57 AM
Oko kumele ukuba kolona LUDE… Bendithetha olona lwazi lucokisekileyo! 😉
Mar 23, 2016 ngo-9: 23 AM
Ndiyayazi kulungile? Kodwa ndandicengcelezekile. 🙂
Epreli 1, 2016 ngo-1: 38 AM
Douglas, iposti emnandi!
Imbono entle echazayo yabasebenzisi be-LinkedIn abafuna ukuqhubela phambili ngomsebenzi.
Epreli 1, 2016 ngo-8: 43 PM
Epreli 30, 2016 ngo-2: 45 AM
Enkosi, ibhlog yakho iluncedo kakhulu.